आजकाल राजधानीमै देख्न पाईने फेवातालहरु ,पौडी खेल्न जान्ने सरकार - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । दशैं अगाडी सरकारले देशभरी नै भएका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन गरेको थियो । केही स्थानमा देखावटी रुपमा टालटुल गर्ने काम गरिएतापनि अझै थुप्रै ठाउँको सडक छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको छ । राजधानी बाहिरको कुरा नगरौं राजधानी काठमाडौंकै थुप्रै ठाउँमा ठुला ठुला पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी छन् । सरकारकै ६ सय १ प्रतिनिधि बस्ने संम्सद भवन अगाडी नयाँ बानेश्वरमै पनि फेवाताल जस्ता खाल्डा छन् ,जहाँ पानी नै नसुक्ने देखिन्छ । त्यस्तै गौशाला मित्रपार्कदेखि नारायणटारसम्मको यात्रा झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यहाँ पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी मात्र होईन ,हिलो र धुलोले पनि प्रत्यक्ष रुपमा जनमानसलाई असर पुर्‍याईरहेको छ । पानी परेको दिन हिलो र घाम लागेको दिन धुलो यो सडकखण्डका मुख्य विशेषता जस्तै बनेका छन् ।
जोरपाटी सडकखण्ड :तस्विर प्रताप ओली
विशेषगरी उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गर्दा सडकको यस्तो अवस्था देखिएको हो । तरपनि एक न एक कारण देखाउने र ढिलासुस्ती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति नेपाली जनता आजित छन् । शेर वहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै दुईपटक सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए । पहिलो पटक साउन १ गते जब मेलम्ची आयोजनाको पाईप बिछ्याउन खनिएको खाल्डोमा परेर एक विद्यार्थी छात्राको मृत्यु भयो त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १५ दिनभित्र उपत्यकाका सबै खाल्डा पुर्न निर्देशन दिए तर सम्बन्धित निकाय सुतिरह्यो ,फेरी साउन १२ गते प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को निर्देशन दिए । यसको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा संयन्त्र पनि गठन गरिएको थियो ।
चावहिल चोक स्थित चुच्चेपाटीतिरको सडक : तस्विर प्रताप ओली
मेलम्ची आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाइप बिच्छ्याएको थियो । मनसुन शुरू भइसकेकाले थप ठाउँमा पाइपलाइनको कार्य गर्दा सर्वसाधारण तथा सवारी साधनको आवागमनमा असर पर्ने भएकाले निर्देशनालयले बाँकी सडकखण्ड खन्न पूर्णरुपमा बन्द गरेको थियो । यसै क्रममा उपत्यकामा खनिएका सडकका कारण दुर्घटना भइरहेकाप्रति निर्देशनालय गम्भीर भएको प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताएका थिए ।
‘सामाखुसी क्षेत्रमा पाइप बिच्छ्याउने निर्देशनालयको कार्यक्रम छैन, साउन १ गते प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र मर्मत गरिसक्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएकोले निर्देशनालयले पाइपलाइन बिच्छ्याउने क्रममा खनिएका सडकलाई दुरुस्त बनाउन प्रयास केन्द्रीत गरेको उनले बताएका थिए ।
कुल ७ सय ३० किलोमिटर वितरण सञ्जालमध्ये २ सय ३० किलोमिटर सडकमा र ५०० किलोमिटर पाइप पैदलमार्ग (फुटपाथ) मा बिच्छ्याइएको निर्देशनालयले बताएको छ । दुईसय ३० किलोमिटरमध्ये पनि मूल सडकमा २६ किलोमिटर मात्र पाइप बिच्छ्याइएको उनले जानकारी गराएका थिए । यसमध्ये २४ किलोमिटरमा अस्थायी कालोपत्र ‘प्राइम कोट’ गरी सकिएको छ । चाबहिल र महाराजगञ्ज क्षेत्रका केही भागमा दुई किलोमिटर सडकमा ‘प्राइम कोट’ गर्न बाँकी छ । यसैगरी, चावहिल, चुच्चेपाटी क्षेत्रमा बर्षातको पानी जम्न नदिन जम्मा भएको माटो फाल्ने काम गरियो ।
अहिले माटो फालिएका स्थानमा पहिले भन्दा डरलाग्दा खाल्डाखुल्डी परेका छन् । उपत्यका क्षेत्रमा अहिले मुख्य गरी चावहिल,चुच्चेपाटी,बौद्ध,नायाणटार,जोरपाटी,त्रिपुरेश्वर,कलंकी,नयाँबानेश्वर,बल्खु लगायतका ठाउँमा यात्रा निकै असहज हुने गरेको छ । साल ,महिना ,हप्ता ,दिन र ऋतु त फेरिएकै छन् तर नेपाली राजनितिक धार र नेपाली संरचना कहिल्यै नफेरीने आम जनताले सोझै महसुस गरिरहेका छन् । यसरी सरकारको प्रत्यक्ष नजर पुग्ने ठाउँ त यस्ता छन् भने जनताले माग गरेका विकेन्द्रित समुदायमा बसेका जनताले कसरी सरकार भएको महसुस गर्लान् ? सधैं बिजुली छैन,सडक छैन,खानेपानी छैन ,स्कुल कलेज छैन भन्दै कराएपनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ भने अव जनताले मौन बस्नुको बिकल्प के छ ? मन्त्री मन्डल बढाउने सरकारले सयौं जनताले सेवा पाउने एक भौतिक पुर्वाधार बनाईदिए के हुन्थ्यो ? अव कति वर्षसम्म यी खाल्डाखुल्डीमा हामीले पौडी खेल्ने ? भोली यसरी नै गुपचुप रहे के यी पानी जमेका खाल्डाखुल्डीमा अव हामीले फेवाताल देख्न नपाउँला र ? विचरा यो सडकलाई कति भार छ कहिले टेलिकमले फाईबर बिछ्याउन भन्दै खन्छ ,कहिले मेलम्ची आयोजनाले खन्छ । यसरी खन्दा खन्दै र सवारीसाधनको दिनदिनै बढ्दो चापले सडकको अवस्था दिनदिनै दयनिय बन्दै छ ।
त्रिपुरेश्वर सडकखण्ड : तस्विर प्रताप ओली